Maadheen sarjaa A, tarree 1 keessaa A1 ta'ee teessoo argata. Jalqaba koordineetii maadhee gubbaa bitaa bal'inaa galchuudhaan, achiin buufata xiqqaa koordineetii maadhee jala mirgaan hordofamuun hammangaa maadheelee wal cinaa teessessuu dandeessa. Fakkeenyaaf, iskuweeriin maadheelee afran jalqabaatiin xiyyoo gubbaa bitaa keessatti uumamu akka A1:B2 tti wabeeffama.
Bal'ina haala kanaan teessessuun, wabii hirkataa gara A1:B2 gochaa jirta. Hirkataa jechuun asitti akka wabiin gara bal'ina kanaa ufmaan yeroo foormulaawwan garagalchitu akka sirreeffamu dha.
Teessessuu Of danda'aa
Yeroo Wabiilee Hirkatoo fi Of danda'oo Fayyadamnu
Wabii hirkataa maaltu adda baasaa? Akka man'ee E1 keessatti ida'ama man'eelee hammangaa A1:B2 shallagdu jedhii yaadi. Foormulaan E1 keessatti galchitu:=IDA'A(A1:B2) dha. Yoo booda sarjaa haaraa fuuldura sarjaa A irratti saaguuf murteessitu, miseensonni dabaluu barbaaddu achiin B1:C2 keessatti ta'ee foormulaan F1 keessatti ta'a, E1 keessatti miti. Erga sarjaa haaraa saagdee booda, kanaafuu foormulaawwan wardii keessaa hunda mirkaneessuu fi sirreessuu qabda, akkasumas wardiilee biroo keessatti.
Carraan, LibreOffice hojii kana siif hojjeta. Erga sarjaa haaraa A saagdee booda, foormulaan =IDA'A(A1:B2) ufmaan gara =IDA'A(B1:C2) fooyya'a. Lakkoofsonni tarrees ufmaan yeroo tarree1 haaraa saagamu sirreeffamu. Wabiileen of danda'aa fi hirkataa LibreOffice Calc keessatti hoggayyuu yeroo bal'inni wabeeffame deemsifame ni sirreeffamu. Garuu yoo foormulaa garagalchitu waan haala kanaan wabiileen hirkatoo qofti sirreeffamaniif, wabiilee of dandaa'oo waan hin taaneef of eeggadhu.
Wabiileen of danda'oon yeroo shallaggiin maadhee murtaa'e tokko wardii kee keessatti wabeeffatu fayyadu. Yoo foormulaan sirriitti maadhee kana wabeeffatu hirkataan gara maadhee jala maadhee jalqabaatti garagalchame, wabiinis yoo koordineetii maadhee akka of danda'aatti hin qindeessine gara deema.
Yeroo tarreewwanii fi sarjaaleen saagaman irraa kan hafe, wabiileen yeroo foormulaan dura man'eelee murtaa'aa wabeeffatee jiru gara bal'ina wardii biraatti garagalchamu jijjiiramuu danda'a. Akka foormulaa =IDA'A(A1:A9) tarree 10 keessa galchiteetti yaadi. Yoo ida'ama sarjaa wal cinaa gara mirgaatiif shallaguu barbaadde, salphumatti foormulaa kana man'ee keessatti gara gara mirgaatti garagalchi. Garagalchi foormulaa sarjaa B keessaa ufmaan gara =IDA'A(B1:B9) sirreeffama.
Title is: Teessoowwanii fi Wabiilee, Of danda'aa fi Hirkataa